विचार/ब्लग Archives - ejhajhalko.com
क्यान्सरसँग हारेँ तर…
जुना घर्ती मगर फागुन चैतका दिनहरू मलाई सारै मनपर्थे । पालुवा पलाउने । न्याउली चरी बास्ने । हरियाली सिजन । सबैको मन हरियालीसँग रमाउँछ । म त झन् सधँै रमाउने मान्छे । रमाइरहेकी थिएँ । तर सधँै समय एकनासको भइदिँदो रहेन छ । वातवरण पालुवा पलाएर आनन्दित थियो । तर मेरो मन भने फरक हुन थाल्यो । शान्त हैन बेचैनीले छलपट...
शरीरका अंग फर्फराउदा के के हुन्छ जानी राख्नुहोस ?
एजेन्सी । ज्योतिष शास्त्र अनुसार शरीका विभिन्न अंग फरफराउँदा राम्रो र नराम्रो योग उत्पन्न हुन्छ । त्यसका कारण तपाईको जीवनमा कुनै काम बन्ने र कुनै काम विग्रने वा लाभ हानी हुने हुन्छ । कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ? मानवशरीर स्वयं पनि भविष्यका अनेक घटनाको पूर्व सूचना दिन्छ । शरीर का केही अङ्ग स्वयं फर्फराउछन् थाल्छ...
गौरी र ध्रुवलाई रेडियो पत्रकारिता सम्मान
ललितपुर । रेडियो पत्रकारिताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोमा नेपालको पहिलो व्यवसायिक एफएम क्लासिक एफएमले पुराना एवम् वरिष्ठ पत्रकारद्वय गौरी केसी र धुव्र थापालाई राकेश लामिछाने स्मृति रेडियो पत्रकारिता सम्मान २०७४ बाट सम्मानित गरेको छ । क्लासिक एफएमले आफ्नो २२ औ वार्षिक उत्सवको अवसरमा केसी र थापालाई सम्मान गरे...
आज पौष शुक्ल पूर्णिमा,श्री स्वस्थानी ब्रत सुरु,शालीनदीमा विशेष मेला
काठमाडौं । पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना चल्ने स्वस्थानी ब्रत आजबाट सुरु भएको छ । पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन हातगोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध बस्त्र पहिरिएर स्वस्थानी ब्रतको सुरुवात गरिन्छ । एक महिना स्वस्थानी ब्रतसंगै माघ स्नान समेत गरिन्छ । नेपाली महिलाहरुले लिने कठिन ब्रत मध्येको स्वस्थान...
हामीमध्ये कसैलाई पनि अनावश्यकरुपमा मोटाउनु राम्रो लाग्देन । त्यसो त, मोटोपन रोग लुकाउने पर्दा समेत हो । हामी मोटोपनबाट मुक्त हुन विभिन्न अभ्यास गर्दछौं । तर यो कहाँ सजिलो छ र ? तर यहाँ तपाईको लागि एउटा यस्तो चामत्कारिक विधि छ, जुन घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीबाट तयार बनाउन सकिन्छ । यस्तो घरेलु उपचार पद्धतिले शरीरमा जम...
एजेन्सी। रिलायन्स इण्डष्ट्रिजका सुरुवातकर्ता धीरुभाइ अम्बानीको आज ८५ औं जयन्ती मनाइँदैछ । यस अवसरमा हामीले अम्बानी परिवारकी बुहारी नीताका केही खास कुराहरु बताउँदैछौं । नीता अम्बानीले एक अन्तरवार्तामा आफ्नो सोखको बारेमा बताएकी थिइन् । अन्तरवार्तामा उनले भनेअनुसार नीताले आफ्नो दिनको सुरुवात जापानका बनेको पुरानो क्र...
चम्चाको माध्यमबाट कसरी थाहा पाउने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था ?
सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्य स्थितबारे चासो हुन्छ । आफुलाई कुनै रोग पो लागेको छ कि ? वा रोग लाग्ने संभावना छ कि ? यी र यस्ता प्रश्नहरु बारम्बार उठिरहेका हुन्छन् र मनमा अज्ञात भयले डेरा जमाइरहेको हुन्छ । त्यसो भए अब यस्तो शंका-उपसंका गर्न छाड्नुहोस् । किनभने, अब तपाईले आफ्नो स्वास्थ्य-जाँच आफै गर्न सक्नुहुनेछ । त्यो पनि एक...
सँगै नाचे पारस र हिमानी
काठमाडौं । झन्डै तीन वर्षअघि नेपाल फर्किए पनि पूर्व युवराज पारस शाहले निर्मल निवासमा अझै औपचारिक प्रवेश पाएका छैनन्। यद्यपी, पछिल्ला दिनमा उनले पत्नी हिमानीसहित परिवारका सदस्यसँगको सम्बन्धमा भने सुधार गर्दै छन्। आफ्ना उद्दण्ड गतिविधि र अनियन्त्रित खानपिनमा पनि उनले नियन्त्रण गरेका छन्। २०७१ चैतमा बैंककबाटछ फ...
एजेन्सी। एक महिलाका अनेकौं रुप हुन्छन्। आमा, दिदी बहिनी, हजुरआमालगायतका रुपमा महिलाले अनेकौं भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। तर अर्को सत्य के पनि हो भने महिलाको एउटा रुप वेश्या पनि हो। यो तितोसत्य हो। जसलाई स्वीकार गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। तर, वेश्या पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। कतिपय युवती र महिलालाई जबर्जस्ती वेश्यावृत...
कुनै पनि ग्रन्थले कुप्रथालाई प्रोत्साहन गरेको छैन-धार्मिक अगुवा भन्छन्
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लामा पहिलो पटक सबै धर्मका अगुवा एकै ठाउँमा भेला भएर परम्परागत कुप्रथाका विरुद्ध सचेतना वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन् । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा शनिबार सम्पन्न एक छलफल कार्यक्रममा ती धार्मिक अगुवाले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । सो कार्यक्रममा विभिन्न धर्मका नाममा परम्परागतरुपमा सञ्चालन...
देवर भाउजुले मजाकमै मनमुटु साटे,अन्त्य भयो प्रेम कहानी
विगत ६ महिनादेखि एकअर्कासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेका देवर भाउजुले समाजले सम्बन्धको विरोध गरेपछि दुवैले सँगै आत्महत्या गरेका छन् । उनीहरुले गाउँमै रहेको इनारमा हाम्फालेर आत्महत्या गरेका हुन् । यी दुईमध्ये देवर नाबालिग नै थिए । उनीहरुको मृत्युपछि गाउँलेहरुले उनीहरु प्रेममा रहेको बताएका हुन् । भारतको बिहारको जमुइ जिल्ल...
बहुजातीय देशमा दुईदलीय भन्दा बहुदलीय प्रणाली ठीक
नेपालको विगतको अस्थिर संसदीय इतिहासले गर्दा भविश्यमा पनि अस्थिरता आउनेछ कि भनेर धेरै नेपालीलाई चिन्ता छ । प्रायः लामो समयसम्मको सम्झना नबोक्ने जनताले अस्थिरता अक्सर गरेर बहुदलीयता -उच्च सार्थक दल या दुईभन्दा बढी दल प्रभावकारी रहने अवस्था) र त्रिशंकु सदनले ल्याएको सम्झनु अस्वाभाविक होइन । तर, बहुदलीयता मात्रै अस्थिरताक...
चिनियाँ विकासको चौथो चरणः मोर्चाबन्दी बलियो बनाउँदै सी जिनपिङ
काठमाडौं । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं कंग्रेस (महासभा) चल्दै गर्दा क्युबाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिक्रिया दिएको थियो, ‘राष्ट्रपति सी जिनपिङ विकासको नौलो अभ्यास गर्दैछन् र यो साँच्चै स्तुत्य छ ।’ आगामी केही दशकका लागि चिनियाँ मोडेलको विकासले संसारलाई ‘सरप्राइज’ दिने क्युबाली कम्युनिस्ट नेता जोसे रामोन बलागुरक...
कांग्रेसको लक्ष्यः चुनाव रोक्ने कि कम्युनिस्टको बहुमत छेक्ने ?
काठमाडौं । शनिबार बिहान कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताको घरमै चिया पिउने निम्तो मान्न पुगियो । उनले लामो कुराकानीका क्रममा भने- कांग्रेसले चुनाव सार्न खोज्दैछ भन्ने कम्युनिस्टहरुको स्यालहुँइया मात्र हो, चुनाव सारेर वा टारेर सबैभन्दा घाटा हामीलाई नै हुन्छ, त्यो आत्मघाती बाटोमा हामी किन जान्छौं ? सर्वोच्च अदालतको एउटा ...
कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई खतराः कम्युनिस्टबाट कि अनैतिक गतिविधिबाट ?
अब लाठियौ मे तेल मलमल के आ रहा है चुनाव, दौलत के सँग उछल उछलकर आ रहा है चुनाव, हत्यायौं की गलियौ से चलकर आ रहा है चुनाव, हत्यारे मिल रहे है गले इस चुनाव मे, गहरा के जातपात चले इस चुनाव मे, पाखण्ड, झुठ, पाप चले इस चुनाव मे, वेवस गरिब जाति छले इस चुनाव मे । भारतमा जयप्रकाश नारायणको ‘सम्पूर्ण क्रान्तिको...